Eskişehir Büyükşehir Kadın Parkomat Görevlisi Alacak; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile kadın otobüs şoförü istihdam edeceğini duyurmuş ve şartları sağlayan kadın şoför adayları belediyeye [More ...]
E kwesiri iji mpempe TÜLOMSAŞ mepụta okporo ụzọ dị elu nke National High Speed ​​Train
Nsogbu nke Transportgbọ njem Eskişehir Ndị mmadụ gbagara na Mgbakọ ahụ; CHP Eskişehir osote Utku Çakırözer weere ala ahụ n'oge mkparịta ụka mmefu ego nke 2020 nke oflọ Ọrụ njem na akụrụngwa ma gwa Minista Mehmet Cahit Turan oge nsogbu nke Eskişehir [More ...]
Ekwesịrị imepụta Nchọnchọ YHT na Eskişehir
Ekwesịrị imepụta Nchọnchọ YHT na Eskişehir; Onye isi oche EOSB Nadir Küpeli, onye gara TÜLOMSAŞ General Manager Hayri Avcı, kwuru na e kwesịrị ịmepụta usoro ụgbọ oloko dị elu na Eskişehir. Eskişehir ahaziri mpaghara mpaghara [More ...]
Ndị chọrọ iji ụgbọ okporo si Eskişehir si Istanbul ga-azụrịrị tiketi tiketi Konya
Ndị chọrọ iji ụgbọ okporo si Eskişehir si Istanbul ga-azụta tiketi tiketi Konya; Ndị njem chọrọ ịzụta tiketi site na Istanbul Sogutlucesme na Eskisehir n'ụbọchị ọ bụla enweghị ike ịchọta ebe. Ma, ndị chọrọ ịga Konya n'otu ụbọchị na otu ụgbọ oloko ahụ [More ...]
TULOMSAS 1 Onye Ọbuma Mbu Ọkwa Ga-anata; Turkey Locomotive na Engine Industry Corporation General Directorate (TULOMSAS), a ọhụrụ mbanye mara ọkwa e bipụtara na Official Gazette. N’ozi ekwuputara na-enweghị chọrọ KPSS [More ...]
Rozọ ndị emechiri emechi na Eskişehir iji rụọ ọrụ; Gazi Yakup Satar Street 25, bụ nke emechiri emechi n'oge na-adịbeghị anya n'ihi njikọ njikọ scissor na Yıldız Tram Junction [More ...]
YHT embargo na Agenda Assembly na Eskişehir; Onye isi oche CHP Eski Deputyehir Utku Çakırözer, Train Speed ​​Speed ​​(YHT) Eskişehirliler tinyere aka na mkpirisi mkpirisi nke nkwuputa ndi omebe iwu. Ankara-Istanbul si Ankara ruo Eskisehir [More ...]
Ihe ngosi Rail, Show Rail Mmeputa na Teknụzụ Teknụzụ, nke Fuarc willlık ga-ahazi na nkwado nke Minista njem na akụrụngwa, bụ obi nke [More ...]
Ezinụlọ nke ilmụaka roadgbọ okporo ígwè gbakọtara n'oge nleta na Eskişehir nke onye isi ọrụ Serkan Başavul haziri na 16 November 2019. 150 na-esite na Adana, Ankara, Izmir, Istanbul na Nazilli. [More ...]
Oku ozi oma na Eskisehir ..! Nwanyị ịnya ụgbọ ala ka aga-ewe ya n'ọrụ; Ndi isi obodo ukwu nke Eskişehir ekwuwaala na ọ ga - ewe ndị ọkwọ ụgbọ ala ụmụ nwanyị na ntinye ya na ihe ndekọ mgbasa ozi mmadụ. Ini shouldmụ nwanyị kwesịrị itinye aka na akụkụ niile nke ndụ. [More ...]